Ogaden News Agency (ONA) – Munaasabadda 30Guurada JWXO oo Si Weyn Looga Dhigay Johannesburg
Munaasabadda 30Guurada JWXO oo Si Weyn Looga Dhigay Johannesburg
Waxaa sidii la filayay lagu qabtay magalada Johannesburg ee xarunta ganacsiga Wadanka Koonfur Afrika xuskii Sodon Guuradii kasoo wareegatay Aas-aaskii JWXO.
Munaasabadan oo siwayn loosoo agaasimay ayaa ahayd mid aan lookala hadhin dhamaan umada Soomaaliyeed ee Wadanka K/Afrika. Waxaa munaasabadan kasoo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoo qaarkood kasoo kicitimeen gobolada fogfog ee Wadanka dhexdiisa ah.
Munaasabad ayaa ahayd midii ugu maamuuska badanayd ee abid ka dhacda Wadanka K/Afrika, waxaana kasoo qaybgalay saxaafada Soomaaliyeed, iyadoo uu si hagar la,aan ah uga dhexmuuqday TV-ga Caalamiga ah ee KALSAN TV.
Munaasabadan oo lagu daahfuray Aayada Qur-aan ah ayaa qudbada kahor loo istaagay Heesta qaranka Ogaadeeniya. Ka dibna waxaa qudbad aad u qiimo badan oo meelo badan taabanaysa ka soo jeediyay Gudoomiyaha Jaaliyada Mudane Maxadamed Daahir oo si qodo dheer uga hadlay isbadaladii siyaasadeed ee halganku soo maray mudadaas.
Waxaa sidoo kale shirka kahadalay ergadii ka socoty Jaaliyada Oromiya Mudane Cabdinaasir iyo C/raxmaan oo ka warbixiyay xaalada Haganka ee Oromiya. Sidoo kale siyaasiyiin aad ugu dhuunduleesha maamulka liita ee TPLF ayaa qudbado dhaxal gal ah kasoo jeediyay munaasabadan.
Waxaa munaasabada Gabay aad u qiiro badan lana hadlaya dhamaan umada Soomaaliyeed soo jeediya Abwaanka Qaaliga ah N/Hure Khadar Colaad oo looga bartay Gabayo Halgameed. Waxaa isna Taariikhda Ogaadeniya si faah faahsan uga hadlay Hogaanka warfaafinta JOKA Mudane C/raxmaan Siciid oo soo bandhigay taariikhda Wadanka Ogaadeniya lagasoo bilaabo qornigii 12aad ilaa hada mudo 814 sano kusiman wixii Ogaadeeniya ay soo martay.
Waxaa shirka qayb wayn kulahaa dhaliyada JOKA iyo OYSU oo soo bandhigay barnaamij cajiib ah Majajilo, heeso iyo dhaantooyin aad loogu riyaaqay. Munaasabadan ayaa ku soo dhamaatay guul, farxad iyo Rayn rayn aad kaga bogan doontaan TV-yada.